OTU ESI EHICHAA YANDEX NCHỌGHARỊ - YANDEX - 2019
Yandex zuru ezu. Nchọgharị site na mkpofu
Mgbakwunye AdBlock, nke a na-eme maka ihe nchọgharị na-ewu ewu na iji gbochie mgbasa ozi, enwere ike ịnwe nkwarụ nwa oge na ike ịmegharịa. Enwere ike ịrụ ọrụ a n'ọtụtụ ụzọ, dabere na ala mbụ. N'ihe akụkọ nke ụbọchị a, anyị ga-ekwu maka itinye ntinye a na nchọgharị Google Chrome.
Lee kwa: Wụnye AdBlock na Google Chrome nchọgharị
Kwado AdBlock na Google Chrome
Usoro maka itinye mgbatị na ajụjụ dịgasị iche site na usoro yiri nke ahụ gbasara njikọ ọzọ ọzọ ma e wezụga nhọrọ nke abụọ. N'inwe nkọwa zuru ezu na isiokwu a, ị nwere ike ịgụ ntụziaka na njikọ ndị a.
Gụkwuo: Gbanyụọ nkwalite na Google Chrome
Nhọrọ 1: Jikwaa Njikwa
Usoro a dị mkpa na ọnọdụ ebe mgbatị ahụ nwere nkwarụ site na ntọala ihe nchọgharị Ịntanetị ma adịghị arụ ọrụ na ihe ọ bụla e meghere.
Nwee ihe nchọgharị weebụ gị, gbasaa menu isi site na ịpị bọtịnụ kwekọrọ na nri aka nri elu, wee họrọ "Ngwaọrụ ndị ọzọ". Site na ndepụta e nyere, họrọ ihe ahụ "Ọpụpụ".
Na ibe nke mepee, chọta nchikota. "Adblock" ma ọ bụ "AdBlock Plus" (dịka nsụgharị nke ntinye). Ọ bụrụ na ọ dị mkpa, ịnwere ike iji ogwe ọchụchọ ahụ.
Gbanwee ala nke ihe mmịfe ahụ dị n'akụkụ aka nri ala nke ogwe ahụ site na ịpị bọtịnụ òké aka ekpe. N'ihi ya, agba ya ga-agbanwe, akara ngosi ọhụrụ ga-apụta n'elu panel.
Tụkwasị na nke a, i nwere ike iji oghere ndọtị mepee site bọtịnụ ahụ. "Nkọwa". N'ebe a, ị ga-agbanwekwa ihe mmịfe ahụ na akara "Gbanyụọ", si otú ahụ gbanwere uru ya "ON".
Nke a mezue ntuziaka ahụ, dị ka mgbe emechara omume, AdBlock ga-arụ ọrụ dịka ọ dị na mbụ, dabere na ntọala ya. Echefukwala ime ka ibe gi megharia tupu ekwusiri ya.
Nhọrọ 2: Ntọala AdBlock
N'adịghị ka usoro gara aga, usoro a ga-enye gị ohere iji mgbatị ahụ site na ogwe ntụle pụrụ iche. Iji nọgide n'ihu, ịkwesiri ijide n'aka tupu AdBlock arụ ọrụ dịka ntuziaka ndị dị n'elu na ntọala ihe nchọgharị gị. N'ezie ọ bụ mgbe ezubere iche ma ọ bụ ihe mberede, dịka ọmụmaatụ, n'ihi ọdịda, igbochi mgbasa ozi mgbasa ozi na ụfọdụ Intanet.
Na n'elu panel nke ihe nchọgharị weebụ na n'akụkụ aka nri nke ebe nkesa ahụ, chọta akara ngosi ndọtị. Ọ bụrụ na enwere nkwarụ n'ezie, o yikarịrị ka akara ngosi ga-acha akwụkwọ ndụ.
Rịba ama: Ọ bụrụ na AdBlock adịghị egosipụta na panel ahụ, enwere ike zoo ya. Mepee menu ihe nchọgharị ma weghachite akara ngosi azụ.
Pịa aka ekpe na akara ngosi ma họrọ "Zoo mgbasa ozi ọzọ".
N'ihi ọtụtụ nhọrọ maka igbochi mkpọchi ahụ, a pụrụ dochie akara ahịrịokwu ahụ "Mee ka AdBlock rụọ ọrụ na ibe a".
Enwere ike inwe ọnọdụ mgbe mgbatị ahụ nwere nkwarụ na ụfọdụ ibe na Ịntanetị, ebe ọ na ndị ọzọ ọ na-arụ ọrụ nke ọma. Iji dozie nke a, ị ga-ahụ aka na-ahụghị ihe onwunwe ma malite mkpọchi ahụ.
Mgbe ụfọdụ, a na-agbakwunye saịtị na ndepụta ahapụ, nke a ga-ehichapụ. Iji mee nke a, site na mmeba mmemme, mepee "Nhọrọ" wee gaa taabụ "Hazie".
Chọta ngọngọ "Tinye aka nzacha aka"pịa bọtịnụ ahụ "Mbido" ma kpochapụ ederede ederede n'okpuru ebe a. Pịa bọtịnụ ahụ "Chekwa"iji mee ka adblock.
Mgbe ịkwụsị n'emeghị ihe nzacha, naanị ihe ngwọta bụ iwepụ ma degharịa ndọtị ahụ.
Ọ bụrụ na enwere nsogbu ọ bụla na usoro nsonye ma ọ bụ arụmọrụ nke ngwanrọ a tụlere, ị nwere ike ịkpọtụrụ anyị na ihe maka ndụmọdụ.
Akwụkwọ ntuziaka akọwapụtara adịghị achọ ihe ọmụma ọ bụla pụrụ iche, na-enye ohere itinye ntinye ahụ na nzọụkwụ ole na ole dị mfe. Olileanya, mgbe ị gụsịrị isiokwu anyị, ị nweghị ajụjụ gbasara isiokwu ahụ.